Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ka hadlay Warar ay tabiyaan Warbaahinta Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ka hadlay Warar ay tabiyaan Warbaahinta Dalka
Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ka hadlay Warar ay tabiyaan Warbaahinta Dalka
Dr: Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya ayaa ugu horay kaga mahad celiyay Warbaahinta Dalka howsha ay u haayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan sida ay kaga qeyb qaateen masiibadii 14 Octobar ka dhacday Isgoyska Ex Soobe.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya Dr Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in ay tahay in lagu Amaano Warbaahinta Soomaaliyeed daruufaha ay ku shaqeeyaan ayna mudan tahay in lagu amaano doorkii ay ka qaateen batinta iyo gurmadkii loo sameeyay dhibaatadii 14 October.
Dr Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaahay in ay tahay Warar qaar in ay ka fiirsato Warbaahinta Soomaaliyeed aysana ahayn in bulshada loo tabiyo maadaama ay yihiin kuwo gudbinaya muuqaal xun isagoona tusaale usoo qaatay weerarkii maleeshiyaadka nabad diidka ah ee Al shabaab ay dhawaan ku qaadeen Hotelka naasohablood2 ee Degmada Xamarweyne.
Hadalkaan Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliya Mudane Axmed Cali Daahir aya kusoo beegmaya xili magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka uu shir wadatashiya kaga soconaayo Wasaaradda Warfaafinta Qaranka,Wasaaradaha Maamul goboleedyada qeybta ka ah Dowladda dhexe iyo Warbaahinta Madaxa banaan ee Dalka.
Warbaahinta Madaxa banaan ee Dalka ayaa Xusid mudan in ay doorwayn ka qaadatay horumarinta Dalka inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo dal- doloolo yar yar oo ku aadan qaabka tabinta wararka Dalka.
Previous articleGuddoomiyaha Guddiga Warfaafinta iyo Isgaarsiinta oo ku baaqay in la Xoojiyo aqoonta Wariyeyaasha
Next articleMeydka gabadh Soomaali ah oo laga helay gobalka Queensland ee dalka Australia